HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH ARBACO 23-KA SEPTEMBAR 2020-KA
Wednesday September 23, 2020 - 11:28:27 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweyne Farmaajo oo kala hadlay Gud doonka 2da Aqal ee Baarlamaanka sii amba qaa didda Heshiiska Doorashooyinka Dalka Madaxwaynaha J/F/Soomaaliya Md. Maxa med C/hi Farmaajo oo kulan wadajir ah la qaa tay Madaxda Dowlad-Goboleedyada, Guddoo nka
Madaxweyne Farmaajo oo kala hadlay Gud doonka 2da Aqal ee Baarlamaanka sii amba qaa didda Heshiiska Doorashooyinka Dalka Madaxwaynaha J/F/Soomaaliya Md. Maxa med C/hi Farmaajo oo kulan wadajir ah la qaa tay Madaxda Dowlad-Goboleedyada, Guddoo nka 2da Aqal ee Baar la ma anka F/S oo ma al iya ayaa kala hadl ay muhiimadda ay leedah ay in la sii amb aqaado qodobbadii ka soo ba xay Shirkii Muqd isho ee Wadatashiga Doorashooyinka iyo dha mmeystirka Heshiiskii Samareeb 3. Madaxda ayaa ka arrinsaday sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho wakhtigeeda ku dhacda, kana turjunta hiigsiga iyo horumar ka ay ku tallaabsadeen shacabka iyo Dowlad da Soomaaliyeed sanadihii la soo dhaafay, si loo xoojiyo xasilloonida, midnimada iyo nabad da dalka. Kusimaha Agaasimaha Warfaafinta iyo Xirii rka Warbaahinta Madaxtooyada Mudane Cabd irashiid Maxamed Xaashi ayaa tilmaamay dad aalka Madaxdu ay ku bixinayaan sidii loo sii amba-qaadi lahaa dhammeystirka Heshiiska Doorashooyinka oo hagaya in doorashadu ay wakhtigeeda ku qabsoonto. "Kulanka ayaa ku qotamay sii ambaqaadi dda qodobadii Warmurtiyeedkii 17-kii bishan ay wadajirka u soo saareen Madaxwaynaha JFS, Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Ma amulka Gobolka Banaadir, kaas oo qodobkiisa 11-aad uu qeexayey in Heshiiskan siyaasade ed loo gudbindoono Baarlamaanka Federaalka si ay u meel mariyaan." Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farma ajo oo qaadanaya doorka kaga aaddan midni mada iyo ilaalinta wadajirka Shacabka Soom aaliyeed ayaa kula dardaarmay Guddoonka Baarlamaaka in ay sii ambaqaadaan qodobba dii ka soobaxay Shirkii Muqdisho, kana gutaan waajibaadka Dastuuriga ah ee ka saran dhaq an-gelinta qodobbadii ka soo baxay. DHAMMAAD
Sii Hayaha R/wasaaraha oo la shiray Wakii lada Beesha Caalamka
Sii Hayaha R/Wasaraha XFS, Mahdi Maxa med Guuleed (Khadar) ayaa guddoomiyay shir u dhexeeyay DFS iyo Wak iilada Beesha Caalamka oo Shalay ka dhacay M/ Muqdisho
Shirkan oo ay sidoo goobj oog ahaayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda xil gaarsiinta ayaa si gaar ah diiradda loogu sa aray arrimaha mmniga, dhaqaalaha, horumar ka siyaasadda loo dhanyahay.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ay uu Mahdi Maxamed Guuleed ku sheegay "Shalay waxaan shir guddoomiyay kulankii u gu horeeyay ee aan yeelanay Safiirada Caala mka, tan iyo markii uu bilowday cudurka safm arka ah ee COVID-19, sanadkan.” "Waxaan ka wada hadalnay arrimaha amniga, siyaasadda loo dhanyahay, dib u habaynta dhaqaalaha iyo horumarka. Waxaan uga mahadcelineynaa dhammaan la hawlgalayaashayada taageerad ooda.”
Ra’iisal Wasaare Rooble oo Maanta hortagi doono Golaha Shacabka
R/Wasaaraha magacaaban ee dalka, Md. Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa Arbaca da Maanta ah lagu wadaa inuu hortago Xildhib aanada Golaha Shacabka.
Madaxweynaha JFS, M.Maxamed C/hi Far maajo ayaana R/Wasaaraha cusub horgayn doono G/Shacabka, si uu codka kalsoonida u gu weydiiyo. Xildhibaanada GSBFS ayaa tele efanadooda gacanta loogu diray fa rriimo loogu sheegayo inuu Madax weynaha khudbad u jeedin doono golaha, isla-markaana looga baah anyahay inay kulankaasi soo xaadi raan.
Wararka ayaa sheegaya in Xildhibaanada GSHBF ay codka kalsoonida siin doonaan R/ Wasaaraha cusub ee dalka, waxaana aad u yar wararka shakiga gelin kara inuu kalsoonida waayi karo R/Was aare Rooble.
R/Wasaaraha ayaa habeenkii Axada G/ Sha cabka ka codsaday inay taageeradooda siiya an, si aan u guto buu yiri waajibaadkeyga.
Madaxweyne Farmaajo ayaa habeenkii Khamii sta Maxamed Xuseen Rooble u magacaabay inuu noqdo R/Wasaaraha xiga ee dowladiisa.
Xog: Cabdi Qeybdiid oo Cali Mahdi u gudbi yay codsi ka yimid R/Wasaaraha cusub
Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, ayaa Dorraad kulan la qaatay madaxweynihii ho re ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo dho waan loo wakiishay hogaaminta siyaasadda Mudullood.
Warar lagu kalso on yahay oo ay he shay warkii.com ayaa sheegaya in Senator Qeybdiid uu Cali Mahdi u gudbiyay codsi ka yimid Ra’iisul Wasaaraha magacaab an ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo ahaa in Mudullood siiyaan fursad oo aysan ka hor imaanin xukuumadda uu soo dhi si doono iyo guud ahaa hogaamintiisa.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa noo sheegay in Qeybdiid uu sidoo kale Madaxweynaha u sheegay in Ra’iisul Wasaaraha iyo Xukuuma dda uu keeni doono ballan qaadayaan in aan la dhibaateynin Mudullood loona fududeeyo wax kasta oo ay xuquuq u leeyihiin islamarka ana ay awooda dowladda Soomaaliya.
Md.Cali Mahdi Maxamed, Madaxweynihii ho re ee Soomaaliya ayaa sheegay in uusan jirin wax dhibaato oo ay xukuumadda cusub kala kulmi doonto Mudullood balse waxa uu dalba day in R/wasaaraha ka fogaado wax kasta oo dhaawici kara ama ka fogeyn kara dadka uu matalo ee Hawiye.
Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid waxa uu hormuud ka yahay Xildhibaano iyo Se nataro badan oo dalbanaya in lala shaqeeyo Maxamee Xuseen Rooble oo aan wali helin kal soonida baarlamaanka waxaana muuqato ab aabul xoog leh oo ka socda Muqdisho, kaas oo laguraadinayo kalsonid Beelaha iyo siyaasiinta Md.Cabdi Qeybdiid iyo Rooble ayaa kasoo wada jufada reer Hilowle ee beesha Sacad Habargidir
Axmed Madoobe: Hawiyow M/Muq disho dadka kama xigtaan
Madaxweyne Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa khudbaddii uu ka jeediyay gog oshii ay Shalay beesha Hawiye u dhigtay wux uu sidoo kale kusoo hadal qaaday maqaamka M/Muqdisho.
Hogaamiyaha Jubbaland wuxuu bogaadi yay sida ay isku badashay M/Muqdisho, isla markaana waxa dhibka ugu weyn dadka ku ha ya ay tahay kooxda Al-Shabaab ee aysan jirin cid iska xigsaneysa iyo dad aan kala fikir du waneyn.
Axmed oo hadal ku tuuraya be esha Hawiye oo ay marti u ahaay een wuxuu yiri: "Soomaalida mar key is xamaneyso waxey oran jirtay dowladnim ada Hawiye ugu daran, oo laguma xaman jirin in dowladnimada looga fiican yahay.”
"Waxaa hadda muuqata cidda dowladnima da ugu dhaw, ee raadineysa, ee war dowladni mo, war Soomaali, war hala isku yimaado, war shir nabadeed oraneysa iney Hawiye yahiin wa an idinkaga mahad celinayaa,” ayuu yiri Ax med Madoobe.
Dhinaca kale Axmed Madoobe wuxuu mad asha uga mahad celiyay madaxweyne Maxam ed C/hi Farmaajo sida uu u dhaqmay intii lagu jiray shirkii ay Muqdisho ku yeesheen wuxuuna yiri: "Waxaan uga mahad celinayaa madaxwe ynaha JFS inuu yiri – anigu xitaa dhan farsamo ma rabo ee waxaan rabaa sida ugu dhaqsiya ha badan ee ugu dhaw ee dadka loogu qabto doorasho, una arko iney xasiloonida intaas ku jirto.”
Ugu dambeyntii Axmed Madoobe wuxuu ka hadlay waxa ay u qalanto M/Muqdisho iyo ha ddii beelweynta Hawiye ay ka xigaan Soomaa lida kale.
"Waxaan rabaa inaan ka hadlo M/Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya, Hawiyow aad u dhageysta, caasimaddan Hawiye dadka kama xigo, waa magaaladaan kusoo koray waxna ku bartay, caasimadda Muqdisho waa iney yeel ato maqaam sharci ah oo ay leedahay oo ay matalaad ku leedahay, caasimadda uma baah na gudoomiye loo soo magacaabo, uma baah na nin mar walba la badalo, waxey u baahan tahay gole deegaan, maamul iyo dhaqaale dad ka wax loogu qabto, biyo macaan ay helaan, koronto lacag la’aan ah iyo dhaqaalahooda oo dib loogu celiyo.”
"Xiligii horana waan ka hadalnay howshaas, Shalay hadii Baarlamaanka go’aankaas gaari waayo, waxyaabaha aan rabno raadka in laga tiro waxaa ka mid ah, doorashada soo socota inaan lagu murmin, maqaamka caasimadda iyo matalaadeeda inaan lagu murmin oo la qee xo, wax walba wax cad oo la isku ogyahay in ey noqoto ayaan rabnaa.”
"Howsha aan sidaas u wada qaadano, yaan an isku dhaga-hadlin, anaa ugu jecel Muqdi sho iney maqaam iyo matalaad yeelato, qof iga xigana ma jiro, waxaan idinka sugeynaa in aan sameyno fulinta waxyaabaha aan heshiis ka ku gaarnay, ayna soo baxdo in loo dareeri karo doorashada”
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Q/ Midoo bey Amb. Abuukar Daahir Cusmaan (Abuukar Baalle) ayaa wax ka guddoominaya Kulanka 75aad ee Golaha Guud ee Q/Midoobey oo ka furmay ma gaalada New York.
Amb. Abuukar Baalle ayaa ka mid ah 21 Kuxigeenka ee Kulanka 75aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobey, iyag oo ka qeyb qaadanaya agaasinka iyo xiriirinta shirka
Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoob ey ayaa sanadkan Madaxda Adduunka ay uga qeyb qaadanayaan muuqaalka foggaan ara gga, maadaama uu Caalamka si weyn ugu faa fay cudurka safmarka ah ee Coronavirus.
Danjire Abukar Baalle ayaa si weyn uga soo dhex muuqdey Qaramada Midoobey tan iyo markii loo magacaabay xilka wakiilka Joog tada ah ee Soomaaliya bishii July Sanadkii 2017.
Soomaaliya ayaa ugu dambeysay shir-gudd oonka sanadkii 1986-87, waxaana ay ka mid aheyd shir-guddoonka kulankii 41aad ee Gola ha Guud ee Qaramada Midoobey, sidoo kale labo goor oo hore ayay ka mid noqotay Gud doonka Golaha Guud, sanadihii 1963-64 Kulan kii 18aad iyo 1979-89 kulankii 34aad.
Kheyre oo la kulmay Qoorqoor muddo 50 cisho ka dib ridistiisa
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ah na Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre iyo Madaxweynaha Galm udug Axmed Cabdi Kaa riye (Qoorq oor) ayaa Ha been hore kulan gaar ah ye eshay, iyagoo labada nin is arkay 50 cisho ka dib ridistii Xasan Cali Khe yre Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorq oor ayaa hoygiisa ku booqday Ra’iisul Wasaar ihii hore Xasan Cali Kheyre, iyagoo ka wada hadlayay arrimaha siyaasadda iyo tuhuno 2da dhinac ku kala jiray ee la xiriiray riditaankii Khe yre oo warar soo baxayay sheegayeen inuu wax ka ogaa Qoorqoor.
Md. Kheyre ayaa sheegay in kulan miradhal ah la qaatay madaxweynaha Galmudug, ayna ka wada hadleen arrimaha doorashada iyo ka alinta Galmudug.
Waxaan Habeen hore kulan miro dhal ah la qaatay madaxweynaha D/G/Galmudug Md.Ahmed Ab di Kaarie Waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashada iyo kaalinta Galmudug, sidoo kale waxaan isla eegnay howlaha u qabsoomay Ga lmudugta loo dhan yahay iyo waxyaabaha hor yaalla maamulkiisa”ayuu yiri Kheyre oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook.
Md.Xasan Cali Kheyre ayaa qeyb ka ahaa shirkii Dhuusamareeb 2, iyadoo saddex maalin ka dib markii shirkaas soo gabagboobay uu Go laha Shacabka si lama filaan ah oo aan waaf aqsaneyn dastuurka xilka uga tuuray. R/Wasa arihii hore ayaa markii codka kalsoonida lagala laabanayay ku sugnaa M/Dhuusama reeb, iya doo la sheegay in markii uu soo ba xayay aanu xitaa soo sagootin Madaxweyne Qoorqoor, waana tuhunka ka dhashay inuu wax ka ogaa ridistiisa.
Kheyre ayaa lagu xusuustaa dadaalkiisa dhismaha Galmudugta cusub, isagoo waqti ba dan ku bixiyay, iyadoo sidoo kale uu dhisay Madaxweyne Qoorqoor oo ka mid ahaa Golih iisa Wasiirada.
Shir looga hadlay amniga M/Muqdisho oo la qabtay
Guddoomiye ku-xigeenada Maamulka G/Ba naadir ee Maamulka iyo Maaliyadda, Howlaha Guud iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Qeybta Guud ee Gobolka Banaadir ayaa kormeer am ni ku tagay qeybo ka mid ah degmooyinka Day niile, Yaaqshiid iyo Deegaanka Daarusalaam.
Madaxda Maamulka Gobolka Banaadir iyo Tal iska Booliska ayaa waxa ay shir la qaateen Tal iyeyaasha qeybaha iyo kuwa Saldhigyada 17 Degmo, iyadoona kulankaas uu socday saac ado dhowr ah.
Shirka ayaa inta uu socday ayaa waxaa loo ga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee Caas imadda dalka, sidii loo dardar-gelin lahaa howl aha sugida amniga Magaalada Muqdishoiyo la shaqeynta shacabka.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Saalax Xa san Cumar Saalax Dheere oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in shirarka lo oga hadlayo amniga Caasimadda ay sii socon doonaan iyo howlaha kormeerka ee lagu same eynayo degmooyinka Gobolka.
Mahad Cawad: Doorasho ayaa loo soc daa kuraasteena ka leexda, haddii kale heshiiska saxiixi mayno
Mahad Cabdalla Cawad Guddoomiye Ku xigeenka 2aad ee G/Shacabk Somaliya ayaa ka hadlay walaaca Xildhibaanada qaar ay qab aan ee ku aadan in dib loo soo doorto.
Cawad wuxuu sheegay kursigiisa deegaanka doorashada inuu u soo bedeshay Puntland sababtana ay tahay inuu walaac badan ka qabo Madaxweynaha Puntland.
Guddoomiye Ku xigeenka 2aad ee Baarlamaanka Somaliya ayaa sheegay madax da dowlad Goboledyada in laga doonaayo kur aasta doorasho ee Xildhibaanada G/Shacabka inay faraha ka qaadaan, haddii kale Xildhibaa nada aysan saxiixi doonin heshiiska doora shada.
"Aniga Kursigeyga Galmudug ayuu transet ku soo yahay Saaxiibada kale ee Puntland is ku soo dooranayo hakaa Nabad galaan Madax weyne,doorasho ayaa loo socdaa Amaan ha la idinka helo,haddii kale heshiiska ma ansixine yno”ayuu yiri Gudoomiye Cawad.
Waxaa jira Xildhibaano badan oo isku day ay inay wareejistaan deegaan doorashadooda, balse caqabad wayn ay ka hortimid, walina is ku dayaya inay wareejistaan kuraasta beelaha ka dhaxeysa.
Xubnaha Golaha Shacabka Somaliya ayaa la filayaa in la horgeeyo heshiiskii doorashada, islamarkaana ay ansixiyaan Golaha, kadibna lagu dhaqmo.
Kooxo hubeysan oo toogasho ka geystay M/Muqdisho
Koox hubeysan oo burcad ah ayaa lagu soo warramayaa in saacadihii la soo dhaafay wiil dhalinyaro ahaa ay ku dileen qeybo ka mid ah degmada Dharkenley ee gobolka Banaadir.
Dilka oo ka dhacay xaafada Macalin Nuur ayaa yimid, kadib markii ragga burcadda ah ay gurigiisa ugu dhaceen marxuumka, iyaga oo in ta aysan dilin ka qaatay mobile-kiisa, kadibna toogasho ku dilay, sida ay Caasimada Online u sheegeen ilo deegaanka ah.
Marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jir ay Cabdiraxmaan Ciise Yalaxow, wuxuuna ka mid ahaa dhalinyarada deegaanka.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya inay goobta ka baxsadeen kooxihii ka dambe eyey dilka iyo dhacaasi.
Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa goor dambe tegay meesha ay wax ka dhace en, kuwaas oo baaritaano kooban ka samey ey halkaasi. Illaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada Dhar kenley iyo saraakiisha laamaha amniga Soo maaliya.
Maalmihii dambe Muqdisho waxaa ku soo badanayey kooxaha burcadda ah oo xilliyada habeenkii ah dhac baahsan ka geysanaya qa ar ka mid ah degmooyinka G/Banaadir.
Muxuu yahay shir-weynaha cusub ee uu maanta ku baaqay Cali Mahdi?
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Md.Cali Mahdi Maxamed oo hadal kooban ka jeediyey xaflad soo dhaweyn ah oo Shalay Beelaha Ha wiye ay Muqdisho ugu sam eey een madaxda D/G/ ada & maam ulka G/Banaadir ayaa soo jeedi yey in la qa bto shir-weyne qara n Md. Cali Mahdi ayaa ugu hor eyn madaxweyne Farmaajo ku amaanay badb aadinta qaranimada Soomaal iyeed ee xilligan, maadaama sida uu sheegay hadii uusan tana asuli laheyn dowlad nimada curdunka ah ee Soomaaliya ay khatar ugu jirtay inay burburto.
"Madaxweynaha waan uga mahad Celina yaa, waana ku bogaadinayaa, markii uu arkay haddii saan loo kala taagnaado in qaranimada Soomaaliya ay burbureyso tanaasulka uu muuj iyey, runtii waan ku amaaneynaa go’aankaas uu qaatay,” ayuu yiri.
Md.Cali Mahdi ayaa ka dhawaajiyey in Soo maaliya ay dhibaato daran ku soo jirtay 30-kii sano ee lasoo dhaafay, maantana aysan u baa hneyn khilaaf dambe, "Soomaalidu waxay u ba ahantahay inay is walaashato maanta,” ayuu yiri.
Mahadweynihii hore ee Soomaaliya Md.Cali Mahdi ayaa madaxda DG/yada oo dhamaanto od ku sugnaa xafladan ka dalbaday inay qabta an shir-weyne Qaran oo la isugu keenayo dad ka Soomaaliyeed ee ku kala irdhoobay colaad ihii sokeeye ee dalka ka dhacay.
"Soomaaliya dhibaataa kala gaartay waa is dishay, waa kala guurtay, waliba qof kasta wa xa uu ku noqday tuuladii uu lahaa, hadda kor waa la iska fiirsanayaa oo waal la isku jeedaa, laakiin la isu imaan maayo,” ayuu yiri.
Waxa uu sheegay in cudurka ka dhashay col aadihii dalka ka dhacay uu sii jiraayo illaa dad ka Soomaaliyeed la isugu keenaayo shir wey ne ay isku saamaxaan.
"Waxaan inka codsanayaa in la qabto shirw eyne Soomaaliyeed oo dib u heshiisiin dhaba la sameeyo, hadeysan dhicin taas oo aan shirk aas la qaban, Soomaali colaadu waa jireysaa, waxayna ku daawoobi karaan in la isu keeno, haatan idinkaa masuul ka ah dalka ee shirwe yne Qaran hala qabto,” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyey Cali Mahdi Maxamed.
Taliyaha cusub Ciidanka AMISOM oo ku baaqay xoojinta dagaalka Al-Shabaab
Taliyaha Ciidamada Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Diomede Nd egeya, ayaa kormeer howleed ku tagey ciida mada AMISOM qeybta 5-aad, ee ku sugan magaalada Jowhar.
Booqashada ayaa qeyb ka ah isbarasho ee uu ku mar ayo dhammaan lixda waaxo od ee AMISOM. C/Burundioo ka hoos shaqeeya AMISOM ayaa gacanta ku ha ya qaybta 5-aad oo xarunt oodu tahay M/Jo wh ar, halk aas oo xa run u ahD/G/Hirsha belle, oo qiyaastii 90km u jirta Muqdisho.
Taliyaha ayaa madaxda ciidamada AMIS OM kala hadlay dardargalinta waxqabadka cii dam adaasi iyo ka qeybqaadashada dadaalka logu jiro soo celinta nabadda,ka hortagga Al-Sha baab.Waxaa uu sidoo kale ugu baaqay in ay ka qeyb ka noqdaan sidii Al-Shabaab looga sa ari lahaa meelaha ay gacanta ku hayaan.
Qoorqoor oo diiday dalab uga yimid Guddo omiyaha Barlamaanka Galmudug
Warar lagu kasloonaan karo oo la helayo ay aa sheegaya in Madaxweynaha Maamulka Gal mudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu dii day dalab uu u gudbiyay G/B/ Maamulkaas oo ku aadan Khil aaf kala dhex eeya Xildhibana da.
G/Maxamed Nuur Gacal ay aa Madaxweyne Qoorqoor ka Codsaday inuu soo fara-geliyo Khilaaf xoogan oo soo kala dhexga lay isaga iyo Xildhib aanada Baarla maa nka Galmudug, kaasi oo la sheegay inuu gaa ray meel adeg.
Ilo-wareedyo ayaa tilmaamay in Madaxwey ne Qooqroor uu u sheegay G/B/Galmudug in arimaha Baarlamaanka ka dhex jira laga rabo Inay iyagu xalistaan, hayeeshee uusan fara-gelin ku sameeyn karin.
Xildhibaanadii ugu badnaa ayaa ku sugan Caasimadda Galmudug, waxaana la sheega yaa inay soo saari doonaan War ku aadan G/. Maxamed Nuur Gacal oo khilaaf xoogan haa tan kala dhexeeyo.
Khilaafka soo kala dhex-galay Xildhibaa na da iyo G/ye Gacal ayaa waxaa uu kusoo aad ayaa, xili Madaxweynaha Galmudug Md. Qoor qoor iyo ku-xigeenkiisa Cali Daahir Ciid ay ku sugan yihiin M/Muqdisho.
Al-shabaab oo weerar khasaaro geys tay ka fulisay Kenya
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dag aala xoogan oo dhexmaray Ciidamo ka tirsan Booliska dowladda Kenya iyo dagaalamayaa sha Al-shabaab, kaasi oo ka dhacay deegaan ka tirsan M/Mandheera ee G/Waqooyi Bari ee Kenya.
Dagaalka ayaa ka dambeeyay, kadib mar kii Al-shabaab ay weerar ku qaadeen Kolonyo ay la soc deen Ciidamo Milateri ah ka na tirsan Kenya, xili ay soc daal ku marayeen inta u dhe xeeysa Lafey iyo Alungu-Elwak ee Mandhee ra, sidaasina uu dagaalka ku bilowday. Saraakiil ka tarsal Booliska Kenya oo la had lay warbaahinta ayaa u sheegay in dagaalkaas uu ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray 2da dhinac.
Sarkaal Boolis ah ayaa sheegay in Al-shab aab ay ka dileen 5 dagaalame, halka kuwo ay ka dhaawaceen, sidoo kalena dhankooda uu ka geeriyooday hal Askari, 2kalena ay dhaa wacyo Culus kasoo gaareen, isagoo xusay in dhimashada dhankooda ay korortay.
Dadka deegaanka ayaa soo weriyay in Cii danka Milateriga ahaa ee weerarka lala eegtay ay kusii jeedeen Garoon diyaaradeed, isla ma rkaana dagaalka dhexmaray labada dhinac uu socday muddo ku dhow hal saac.
Al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro toos ah iyo qaraxyo miinooyin ah la eegtay Ciidan ka dowladda Kenya, waxaana inta badan weer aradaas Ciidanka Kenyaan kasoo gaaray Khas aarooyin kala duwan.
Xoghayaha Guud ee Q/Midoobay oo ka digey dagaal qabow oo cusub
Xoghayaha guud ee QM.Mr.António Gut erres ayaa ka digey in dunida ay lugaha la ga sho dagaal qabow.
Mr.Guterres oo ka hadlayay furita anka kulanka golaha guud ee QM.oo diirada lagu saarayo xiisada u dhexeysa Maraykanka iyo Shiinaha iyo weli ba cudurka safmarka ah ee Covid-19 ayaa she egay in dunida ay qarka u saaran tahay jiho halis ah.
Madaxda dalalka Maraykanka Donald Tru mp iyo Shiinaha Xi Jinping ayaa qudbad ka jee din doona kulankan. "Dunidu ma awoodo must aqbal ay 2dii dal ee dhinaca dhaqaalaha ugu awooda badneyd ay mid walba geesteeda ay u sameysanayso sharciyo iyo internetyo,”ayuu yiri Mr Guterres
Maraykanka iyo Shiinaha ayaa isku haysto arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay ganacs iga iyo weliba cudurka safmarka ah ee Corono virus.
4 qof oo ka soo jeeda Louisiana ayaa ku dhimatay markii diyaarad ay sarnaayeen ay ku dhacday dhul daaqsimeed Tex as ee Mareykan ka xilli ay isku dayaysay inay si degdeg ah ku degto, sida ay masuuliyiintu she egeen.
Shilku wuxuu ka dhacay agagaarka garoon ka diyaaradaha ee Hilltop Lakes, oo qiyaastii 120 mayl (193 kilomitir) waqooyi-galbeed ka xigta Houston Waaxda Badbaadada Dadweyn aha ee Texas ayaa sheegtay in dhammaan 4-ta qof ee saarnaa diyaaradda dhinteen.
Leon County Sheriff Kevin Ellis ayaa u she egay wargeyska in diy aaraddu ay isku day ay say inay deg deg deg ku degdegto isla marka ana ay raadiyaha kula xiriirtay Maamulka Duuli sta Federaalka xilligii ay dhacday.
Diyaaradda ayaa ka kacday Horseshoe Bay Resort, galbeedka Austin, waxayna ku sii jeed ay Natchitoches, Louisiana, sida ku xusan diiw aanka duulimaadka, Diyaaradda waxay ka diiw aan gashanayd shirkad ku taal Lafayette, Loui siana. Guddiga Badbaadada Gaadiidka Qaran ka ayaa sheegay inay baarayaan shilka.
Madaxweynaha Kenya oo loo soo jeed iyay inuu kala diro baarlamaanka
David Kenani Maraga Guddoomiyaha Max kamada Sare ee Kenya , ayaa Madaxweynaha Kenya Uhuru Ken yatta u soo jeediyay in la kala diro baarlamaanka Kenya, kaddib mar kii sharci-dejiyaasha ay ku guulda reysteen inay meel mariyaan shar ciga u oggolaanaya in 3 meelood 2 baarlamaanka ay dumarka ahead aan. Tallaabadan ayaa shaqo la`aan dhigi doon ta 418-da xildhibaan ee baarlamaanka Kenya.Xildhibaadan Aadan Keynaan Weheliye oo ah mudanaha laga soo doorto deegaanka Cel dhaas ee Ismaamulka Wajeer, G/W/-Bari sidoo kalena ah xoghayaha Xisbiga Jubilee ee barla maanka Kenya ayaa sheegay in arrintaasi ay yeelan karto 2weji, tan 1aad ayuu ku tilmaam ay inay tahay siyaasad uu cayaarayo guddoom iyaha maxkamadda maaddaama uu waqtigiisa dhammaan rabo.
"Dadweynaha laguma qasbi karo qeybtan si daas u soo doorta, waa dimuqraaddiyad. Nink an waqtigiisa ayaa dhammaaday wuxuu doona yaa wax dalka qalalaaso geliya marka uu tago ka dib, wax socon karana ma aha” ayuu yiri.
Wuxuu sheegay in maaddaama xildhibaann ada Kenya ay shacabka soo doortaan, aan ba arlamaanka lagu qabsi karin inay saxiixaan wax aysan shacabku rabin.
Hogaamiyeyaasha dunida ayaa aallada fog aan araga kaga qeybgalay isniintii xuska 75 aad ee aas aaska Q.M, iyadoo safmarka COV ID-19, iyo dhaqaalaha liita ee caalamka ay ka mid yihiin caqabadaha dunida hor yaala iyo wa xta isku duubnimada ururka oo la unkay daga alkii labaad ee dunida.
Malaayiin dad ah ayaa lagu qasbay in ay gu riyahooda joogaan dhaqaaluhu wuu baaba’ay markii safmarka COVID-19 uu ku baahay caa lamka horaantii sanadkan. Hadda dalalka qaar waxay dareemayaan hirkii labaad ee cudurka 193 dal uu xubnaha ka ah ururkan waxay dare emayaan is aaminaad daro gaar ahaan Mare ykanka iyo Shiinaha oo xafiltankooda sii koreya.
QM.waxay sheegtay in munaasabadda ay ku soo aaday xilli uu dunida aafeeyay safmarka corona gaar ahaan arrimaha dhaqan dhaqaale ee bulshooyinka caalamka.
Madaxweynaha Shiinaha oo kulanka ka qe ybgalay ayaa isniintii sheegay in dalna uusan awood u laheyn in danaha kuwa kale ku amar ku taagleeyo. "Dalna xaq uma lahan in arrima ha dunida uu shiikhiyo ama isaga uu maamul, ama isaga ka faa’ideysto horumarka dhamma an kuwa. Xataa in qof wax yar wixii uu doona yay loo ogolaado ama hogaamiyaha dunida. Keligii talisnimo waa ay dhammaatay.” ayuu yiri madaxweyne Xi.
Shiinaha ayaa hadda isku arka hogaamiya ha duni go’aanada la wada leeyahay ka dib ma rkii Madaxweyne Trump uu ka baxay iskaashi ga caalamka sida heshiiska cimilada, heshiiskii Iran sidoo kale uu joojiyay xubinimada Mareyk anka guddiga sare ee xuquuqul insaanka QM iyo hey’adda caafimaadka ee WHO.
Madaxweyne Trump ayaa ku jirey liiska ma daxda khubadaha ugu horeeya jeedin doona laakiin bedelkiisa waxaa hoolka shirka ee QM ka hadashay sii hayaha xilka danjiraha Mareyk anka ee QM Cherith Norman Chalet.
Waxay sheegtay in hey’adan ay waxyaabo badan oo la soo maray ay tijaabo ugu filan tah ay sidaa darteedna ay jiraan arrimo laga wala acsan yahay.
"QM muddo dheer ayay ka caga jiidaysay is bedel micno elh lagu sameeyo ka dib markii ay lumisay daah furnaanta ayna u nuglaatay agen dayaasha keligii taliyaha iyo digtaatooriyadda,” ayay sheegtay haweeneydan.
Maqanaanshaha madaxweyne Trump ayaa shaki badan abuurtay, dadka waxay is weydiin ayaan tani ma arrin si ula kac loo sameeyay baa mise, QM ayaan kamid aheyn waxyaab aha mudnaanta u leh Mareykanka.
Lacag intee la’eg ayaa ku baxaysa haweena ydii ugu horraysay ee dayaxa u safraysa?
Wakaaladda hawada sare ee Mareykanka (Nasa) ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay qor shaheeda ku aaddan inay ku laabtaan Dayaxa marka la gaadho sannadka 2024.
Iyadoo qayb ka ah barnaamijka loo yaqaan 'Art emis', Nasa waxay u diri doontaa nin iyo gaba dh hawda sare ee dayaxa markii ugu horreys ay, tan iyo markii aadamuhu bilaabay aadiddii sa sannadkii 1972.
Laakiin waqtiga wakaal adda ee hawshaaso waxay ku xidhan tahay Congress-ka oo sii dey naya $ 3.2bn si loogu dhiso nidaamka soo degitaanka.
Cir bixiyeyaashu waxay ku safri doonaan kaab sol u eg Apollo oo la yiraahdo Orion kaasoo oo dah furi doona gantaal awood badan oo la yidh aahdo SLS.
Isagoo ka hadlaya Shalaynimadii Isniinta (wa qtiga Mareykanka), maamulaha Nasa Jim Bri denstine wuxuu yiri: "$ 28bn waxay u taagan tahay kharashyada la xidhiidha afarta sano ee soo socota barnaamijka Artemis ee lagu dego Dayaxa."
sida oo kale waxa uu sheegay: "Codsiga mii saaniyadda ee aan hadda horkeenayno Gola ha iyo Guurtida hadda waxaa ku jira $ 3.2bn oo loogu talagalay 2021-ka oo ah hannaanka soo degitaanka aadanaha. Waana arrin muhi im ah in aan helno $ 3.2bn."
Waxaana uu ku kacayaa safarkaas lacag gaadhaysa 28 bilyan oo doollarka Maraykanka ah. Waxay isticmaali doonaan cir bixiyeyaashu qalab la yidhaahdo Orion
Tartanka dhinaca hawada sare wuxuu u dha xeeyey Mareykanka iyo Midowga Soofiyeeti, ka dib marki ay Soofiyet hawada sare u dirtay dayax gacmeedkii ugu horreeyey.
Marki uu John F Kennedy uu madaxweyne ka noqday Mareykanka sanaddi 1961-kii, shac abka Mareykanka waxay aamineen in dalkoo da tartanka looga guuleystay maadaamaa xill igaasi tartanka teknooloojiyadda uu salka ku hayey dagaalkii qaboobaa.
Mareykanka ayaa wuxuu dhexda u xirtay sidi hawada sare dayax gacmeed uu ugu diri la haa wuxuuna Mareykanka ku guuleystay 1962-kii, madaxweyne kennedi oo ku dhawaaq ay xilligaa inuu dalkiisa dayax gacmeed hawada u dirayo wuxuu yir: "Waxaan doorannay inaan annagu aadno dayaxa!"
Tartanki hawada sare ayaa halkiisa ka sii socday 1965-kii Midowga Soofiyet waxay had dana hawada sare u dirtay dayax gacmeed kel igii uu qofna la socon wuxuuna dayax gacme edkaasi uu soo taabtay dayaxa.
Wakaaladda Hawada Sare ee Mareykanka NASA waxay dajisatay qorshe ballaadhan oo ay ku sii hormarineyso barnaamijka dayaxgac meedka Apolo.
Barnaamijkan oo ay ka howl galayeen 400, 000 oo qof wuxuu ku kacayey dhaqaale dhan $25 bilyan oo doolar.
Dayax Gacmeedka Apolo 11 oo hawada sa re loo ganayo 8 cirbixiyeen ayaa loo doortay howlgalka Apolo 11, waxayna kala ahaayeen Buzz Aldrin, Neil Armstrong iyo Michael Coll ins. Dayax gacmeedkan oo ah mid aad u weyn oo gantaalka sidana uu yahay Saturn V wuxuu ku shaqeeynayey barnaamijyada Apolo iyo adeegyadi uu lahaa waxaana looga tala gal ay inuu cirka soo taabto.
Qorshaha NASA wuxuu ahaa qalabka aas aasiga ah ee hawada sare looga baahan yah ay dayax gacmeedka inta uusan caga dhigan dayaxa in meeraha Orbit la geeyo kaddibna dayaxa looga sii socdo.
Armstrong, Aldrin iyo Collin waxay kala qay bsadeen shaqooyinki dayax gacmeedka u suur agelin lahaa inuu qabto si looga gaaro ujeedki laga lahaa.
Kooxdi ugu horreysay oo tijaaba ka same yso meeraha Orbit wuxuu ahaa Apolo 11, iyo sanadki 1967-kii.
Balse masiibadi ugu horreysay waxay dhac day inta ay tijaabadaasi socotay waxaana qar xay dayax gacmeedki caga dhigan lahaa Orbit waxaana halkaasi ku dhintay 3 cirbixiyeen oo dayax gacmeed kaasi saarneyd.
Inta lagu guda jiray Apolo 11 laftiisa waxaa dhacday cillad dhinaca isgaarsiinta oo la soo daristay dayax gacmeedka xaruunta dhulka ee laga hagayey, Koombiyuutarradana waxay bixi yeen cod digniin ah oo ay khubarada xaruunta joogtay ay horay u maqal.
Waxaana dayax gacmeedkaasi uu gaari waa yey halki loo asteeyey inuu caga dhigto.
Dibaatadaasi marka ay dhacday 20-ka July 110 saacadood ka dib marki uu dayax gacme edka dhulka ka maqnaa dayax gacmeedki day axa ayuu gaaray, Neil Armstrong ayaana noq day qofki ugu horreeyey oo dayaxa dul socdo, 20 daqiiqo kaddibna waxaa ku xigsaday Buzz Aldrin.
Ereyada uu Armstrong isaga oo dayaxa kork iisa lugeynayo uu ku hadlayey waxaa laga dha geysanayey telefishiinno caalmaka ku kala yaallay.
2 qof oo kale oo iyaga la socdayna in ka ba dan 2 saacadood waxay ku sugnaaye en meel ka baxsan dayax gacmeedka ay wateen iyaga oo dayaxa dushiisa sawirro isaga qaadayey oo cilmibaadhisyo kala duwanna sameeynayey.
3 cirbixiyeen oo hawada sare ku sugan Cirb ixiyeennadaasi marki ay dhulka u soo noqon ayeen 24-ka July ayey badda Baasafika ku dul dhaceen.
Dad ka badan 650 Milyan oo dunida dacall adeeda ku kala nool ayaa si toos ah talafish innada uga daawaneysay marki ugu horreysay oo dayaxa la tagay. Guu shaasina Mareykan ka waxay u horsed day inuu dunida u muujiyo inuu yahay waddan awood badan.
1972-kii guud ahaan 6 dayax gacmeed ay aa hawada sare loo diray inkasta oo ay jiraan tagitaanka hawada sare ee inay heerar kala duwan leedahay.
Wakaaladda NASA waxay 2009-ka ay meer aha Orbit u dirtay dayax gacmeed kuwi hore ka casrisan wuxuuna soo qaaday sawirro ay tayadoodu sarreyso.
Caga dhigashada dayax gacmeedka dayaxa waxay sababtay in dabbaaldeg qaran Mareyk anka laga qabto
Cir bixiyeennada iney dayaxa caga dhigte en waxay caddeyn ahaan dhulka ula soo noq deen dhagaxaan ay sheegeen iney dayaxa du shiisa ka soo qaadeen. Mareykanka ayaana noqday waddan ka keli ah ee ay u suuragash ay inuu dayaxa dad u diro ayna dayaxa ku dul socdaan.
Inkasta oo ay Ruushka, Japan, Shiinaha, iyo Hay'adda hawada Yurub, Israa'iil iyo Hindiya ay tijaabooyin ay dayaxa u direen dayax gacmeedyo uu dad la soconna ay dayaxa ka dajiyeen. Margaret Hamilton waxay ku shaqa la hayd barnaamijka Appolo uu ku shaqee yna yey iney allifto
Si kastaba ha ahaatee, tallaabbooyinka ay waddamadaasi u qaadeen dhinaca hawada sare ayaa lagu tilmaamay iney xagga teknool oojiyadda horumar ka gaadheen.
Dayaxa la tagayna waxaa lagu ogaaday in ey Hydrogen iyo Oxygen leeyahay uuna ku wa naagsan yahay in daya xa laga qodo macdinta dahabka, Plat inium iyo macdin aad ugu yar dhulka ama aan lagaba helin balse waddama da tekn ooloojiyadda horumarka ka gaaray ma sheegin sida ay arrintaa u suurageli karto. XIGASHO:-BBC
Nin ku nool dalka Hindiya ayaa caloosha ka dooxay xaaskiisa oo uur leh si uu ogaado wa xa uu noqon doono ilmaha dhalan doono, wax aana dhintay canugii uurkeeda ku jiray, sida ay sheegeen booliska dalkaas.
Qoyska haweeney da waxay ku eedee yeen seygeeda in sababta uu u wee raray ay tahay in uu markasta doonayay in uu ogaado canuga ay sido xaaskiisa gabadh mise wiil.
Lamanayaashan waxay dhaleen 5 gabdhood, ninka wuxuu si joogto ah xaaskiisa ugu cada adin jiray inay dhasho wiil.
Waxaana xabsiga la dhigay ninka dhaawa ca u geystay xaaskiisa balse wuxuu beeniyay in si ula kac uu u weeraray.
Waxay arrintani ka dhacday degmada Bada un ee dhacda gobolka Uttar Pradesh, waana meesha dadka ugu badan ay ku nool yihiin waqooyiga Hindiya.
Saraakiisha booliska waxay BBC-da u she egeen in haatan xaaladda haweene yda ay wa naagsan tahay isla markaana la gu daweynayo cisbitaal ku yaalla magaal ada Delhi.
Gabadh la dhalatay haweeneyda ayaa wa rbaahinta gudaha u sheegtay in laman aya asha ay markasta ku murmi jireen arrinta ah in ay dhasho wiil.
Sida laga soo xigtay walaalkeed, haweeney da waxaa Axaddii loo qaaday cisbitaalka Delhi xilli ay xaaladdeeda halis aheyd.
Wuxuuna seygeeda warbaahinta gudaha u sheegay in bir caarad leh oo ku tuuray xaaski isa, xilliggaasina uusan u maleyneyn inay dhaa waceyso.
"Waxaan dhalay shan gabdhood, mid kamid ah wiilasheyda ayaa geeriyooday, waxaan oga hay in ilmaha uu Illaahey bixiyo"
Waaliddiin badan oo ku nool Hindiya wa xay in ta badan ku rajo weyn yihiin inay helaan wiilal badan.
Ku dhawaad 46 malyan gabdhood ayaa la la'yahay halka jaan iyo cirib ay dhigeen Hind iya 50-kii sano ee lasoo dhaafay, sida laga soo xigtay warbixin ay soo saaray Qaramada Mid oobey bishii Juun.
Sanad kasta, in ka badan 460,000 oo gab dhood ayaa caloosha hooyadood laga soo xa aqaa inta aysan dhalan arrintaas oo ku sale ysan in inta badan la doorbido wiilasha, waxay sidoo kale tallaabadaas horseeday in gabdho badan ay dhintaan madaama la dayacay. Warbixin ay soo saartay dowladda Hind iya sa nadkii 2018-kii waxaa lagu sheegay in damaca loo qabo in la helo wiilal ay horseeday in 21 malyan gabdhood la day aco guud ahaan wad dankaas.
Roman Abramovich: Milkiilaha kooxda Chel sea oo deeq $100 milyan ah siiyay shirkad dhul ka haysata shacabka Falastiin
Elad waa ha'yad ka howlgasha dhulka laga haysto Falastiin ee Bar iga Qudus, gaar ahaan deeg aan lagu magaca abo Sil wan ama "Ir Da vid" oo luq adda Hebre wga h micne heeduna yahay "Magaala dii Daa 'uud"
Tan iyo markii la aasaasay ha'yaddan, sa nnad kii 1986, Elad waxay ku dhowaad 75 guri oo ay ka dhistay Silwan dejiyay qoysas Yuhu ud ah, waxay sidoo kale ha'yadda maamu shaa dee gaannada taariikhiga ah ee ku yaalla Magaa lada Daa'uud, halkaas oo ah goob dalxi iska caan ku ah. Sannadkasta waxaa booqda in ka badan hal malyan oo qof.
Agaasimihii hore ee ha'yadda Elad, Shahar Shilo wuxuu BBC-da u sheegay in istaraatiijiy ada hay'addan ay adeegsaneysay ay aheyd mid dalxiis "si ay u sameyso wax ka duwan siy aasadda dhabta ah ee ka jirta magalaada Daa'uud.
Ha'yadda Elad waxay ku tiirsaneyd lacago deeq ah. Ku dhawaad kala bar deeqdaas na waxay heshay intii u dhexeeysay sannadihii 2005-tii ilaa 2018-kii, kaalmada ugu badanna waxay ka heshay afar shirkadood oo Ingiriiska laga leeyahay.
Dokumentiyada Fin CEN
Baaritaanka ayaa lagu ogaaday in shirkadaha Abramovich ay ugu deeqeen ha'yadda Elad 100 malyan oo doolar
Magacyada afartan shirkadood ee deeqdaas siiyay Elad waxay ka soo muuqdeen document iyo bangi oo si sir ah loo dusiyay ee lagu maga caabo "Fincen Files." Waxaa dokumentiyada ku jira macluumaadka bangiga ee ku saabsan lacagaha lagala baxay iyo cidda leh shirkada haas.
Warbaahinta Buzzfeed ayaa si hoose ku he shay dokumentiyadaas oo loo gudbiyay urura da caalamiga ah ee weriyeyaasha dabagalka sameeya iyo BBC-da.
Magaca ka muuqda dokumentiyada waa Roman Abramovich, waxaana ku xusan in uu yahay milkiilaha saddexda shirkadood ee deeq da siiyay ha'yadda Elad halka shirkadda afara ad uu isaga maamule ka yahay.
Akoonka ha'yadda Elad waxaa ka muuqda in shirkadahaas ay ugu deeqeen in ka badan $100 milyan oo doollar. Waxayna taasi ka dhi gan tahay in milkiilaha kooxda Chelsea uu ah aa isha ugu weyn ee dhaqaalaha siin jirtay ha' yadda Elad, 15-kii sano ee la soo dhaafay.
Malaayin qof ayaa booqdaa deegaanka ay maamusho Elad oo ah goob taariikhi ah oo ku yaalla Bariga Qudus Goobaha taarikhiga ah ee ku yaalla dhulka la heysta waxaa lagu maamulaa xeerar lagu muransan yahay, waxaana suuragal in Israa'iil ay jebineyso xeerarka caalamiga ah, marka ay u ogolaane ysay ha'yadda Elad in ay howlo sah an ah ka sameyso deegaanka Silwan.
Waxaa intaas dheer, in loo ogolaaday in da dka ay dejiso deegaanka, waxaana tallaabad aas lagu tilmaamaa mid ka dhan ah xeerarka caalamig ah. Israa'iil, deegaankaas uma arag to in ay heysato.
Ha'yadda Elad waxay sheegeysaa in laga ma maarmaan ay tahay in ay sameyso howla ha taariikhiga ah ee deegaanka taas oo looga golleeyahay ilaalinta dhaqanka Yuhuudda. Shirkaddan waxay BBC-da u sheegtay in ay raacday shuruucda iyo xeerarka Israa'iil ee u degsan ha'yadaha aan dowliga aheyn.
Mar wax laga weydiyay in Roman Abramovich uu deeq siin jiray iyo in kale, waxay ku jawaab tay in siyaasaddooda ay dhigeyso ilaalinta sirta deeq bixiyaha.
Ku dhawaad kala bar deeqda deeqda la sii yay ha'yadda Elad intii u dhexeysay 2005-2008 waxaa bixiyay afar shirkadood uu leeya hay Abramovich
Afahayeen u hadlay Abramovich wuxuu BBC-da u sheegay: "Mr Abramovich way ka go'an tahay, waana deeqsi taageera Israa'iil iyo bulshada Yuhuudda. In ka badan 20-kii sa no ee la soo dhaafay wuxuu deeq ahaan u bixi yay illaa $500 malyan oo doollar oo uu ku taa geerayay caafimaadka, seyniska, waxbarasha da iyo bulshada Yuhuudda ee ku nool Israa'iil iyo guud ahaan caalamka".
Haddii aanay dhaaqalahaas heli laheyn ha y'adda Elad, uma suuragasheen in si degdeg ah ay ugu guuleysato hadafkeeda ah xoojinta jiritaanka Yuhuudda ee agagaarka Falastiin.
Qaar ka mid ah guryaha ay ha'yadda Elad dejisay dadka waxaa laga saaray dad Falastii niyiin ah oo horey dhulkaas u lahaa, balse wax aa laga barakiciyay dhulkaas iyadoo la adeeg sanayay sharciga Israa'iil ee muranka badan dhaliyay ee loo garanayo "Sharciga ka maqna anshaha hantida".
Wuxuu sharcigan u ogolaanayaa Israa'iil in ay la wareegto hantida ay dadka Falastiiniyiin ta isaga tageen ama kuwa ka qaxay guryaho oda xilligii dagaalka.
Waxaa kiiskaas udub dhexaad u ah, guriga Sumarin oo ku yaalla dhinaca midig ee xarunta ha'yadda Elad, waxaana halkaas ku nool qoys ka kooban 19 qof.
Amal Sumarin, oo ah hooyada dhashay qoys kan waxay sheegtay: "Markii aan ku aqal galay halkaas, seygeyga wuxuu ku noolaa halkan isa ga iyo adeerkii Xaaji Muuse Sumarin."
Amal Sumarin waxay sheegtay in xaaskii Xaaji Muuse Sumarin ee geeriyootay, waxay u sameyn jirtay: "Waan daryeeli jirnay, cuntada ayaan u karin jirnay waana quudin jirnay. Sey geyga wuu u qubeyn jiray, wuxuuna geyn jiray isbitaalka. Wuxuu nagu oran jiray 'Gurigan idi nkaa iska leh gaar ahaan canugeyga - aniga iyo seygeyga'."
Qoyska Sumarin waxay dagaal kula jireen howlaha deegaameynta Israa'iil tan iyo sann adkii 1991-kii Xaaji Muuse Sumarin, wuxuu geeriyooday sannadkii 1983-dii, waxaana guri giisa la war eegtay Israa'iil iyadoo adeegsa neyso sharciga ka maqnaanshaha hantida ee 1987, waxaana laga iibiyay waaxda Hemnutah oo qeyb ka ah sanduuqa qaran ee maaliyadda ee Yuhuudda (JNF).
Sanduuqan JNF waxaa shaqadiisa ka mid ah in uu iibiyo isla markaana dhulka u dhiso dad ka Yuhuudda.
Sannadkii 1991, Hemnutah waxay ka cods atay maxkamadda in qoyska Sumarin laga raro gurigooda.
Qoyska Sumarin oo taageero ka helayay ha'yado aan dowli aheyn iyo maamulka Falas tiin waxay bilaabeen in arrinta ay maxkamad geeyaan. Maxamed Dahle oo muddo 10 sano ahaa qareenkii qoyska Sumarin, wuxuu BBC-da u sheegay: "In dib loo soo celiyo hantida Falastii niyiinta ee la siiyay dadka Yahuudda ah, maa han arrin suuragal ah."
Bishii Agoosto qoyskan waxay ku guulda reysteen racfaan ay ka qaateen kiiska oo ay dhageysatay maxkamadda degmada Qudus, haddana waxay dacwaddooda u gudbinayaan maxkamadda ugu sarreysa Israa'iil oo la filayo in kiiska ay dhageysato bisha April ee sann adka 2021.
Ha'yadda Elad waxaa lala xiriiriyay tallaabo oyin dhowr oo dhulkooda looga raray Falastiin iyiin ku sugan Bariga Qudus
BBC-da qeybta Carabiga waxay ogaatay in ha'yadda Elad ay dabada ka riixeysay howlaha ah in dadka Falastiin laga raro guryahooda iya doo ogolaatay inay bixineyso dhammaan khar ashaadka ku baxayo kiiska, sida ku xusan war qad loo diray Hemnutah sannadkii 1991-kii iyo kiis kale oo ku saabsan qoysas laga raray dee gaanka Silwan.
Waaxda Hemnutah kama aysan jawaabin su'aalaha ku saabsan dacwaddan, halka Elad aysan xaqiijin in weli ay maalgelineyso kii sa ska. Hay'adda Elad waxay sheegtay in dhamm aan hantideeda ay si caddaalad ah ku heshay "Ma jiro qof Falastiini ah oo laga raray gurigiisa oo ku yaalla Magaalada Daa'uud iyadoo aanan loo marin hanaan maxkamadeeda, ama qof aan loo ogolaan in kiiskiisa uu maxkamad u gu dbiyo," waxa sidaas yiri Doron Spielman.
Qareenka qoyska Falastiiniyiinta ah Maxamed Dahle ayaa yiri: "Waa xaalad hal qowmiyad ah ay ku sameysaneyso sharci dan u ah halka qo wmiyad kale uu dhibaateynayo sharcigan".
Saameynta ha'yaddan ayaa ku sii xoogey sanaya dhulkaas. Safiirka Mareykanka u fa dhiya David Friedman wuxuu si weyn u taage eraa deegaameynta Israa'iil ay ka wado dhulka la heysto, wuxuuna ka qeyb qaatay munaasa bad lagu daahfurayay magaalada Daa'uud.
Friedman wuxuu ka mid ahaa dadkiii sida weyn u taageeray sannadkii 2019-kii in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil.
Sannadkan 2020, markii madaxweyne Tru mp uu shaaca ka qaaday qorshaha nabadda ee Falastiin, wuxuu deegaannada ay maamu sho ha'ayadda Elad ku magacaabay deegaano taariikhi ah ama kuwa ruuxi ah oo u baahan in la ilaaliyo, waxay dhammaan deegaannadaas ku yaalla dhulka la heysto ee Falastiiniyiinta la
Shiinaha ayaa si guul leh ku soo saaray day ax gacmeed cusub oo lagu kormeerayo badda sida lagu sheegay warbixin cusub oo kasoo ba xday waaxda Dayax gacm ee dyadda.
Gantaal dheer oo ah Mar ch-4B oo watay Da yax gacmee dka HY-2C ayaa laga soo qaaday 13:40 Waqt iga Beijing markii laga bilaabay Wa qooyiga-galbeed ee Shiina ha ee Jiuquan Satel lite Launch Center.
Dayax-gacmeedka HY-2C, oo loogu magac daray ereyga Shiinaha ee Haiyang ee "badw eynta” loona bixiyey "HY” soo gaabinta, waa dayax-gacmeedkii saddexaad ee indha in dheynta badda, iyo dayax gacmeedkii labaad ee kaabayaasha hawada sare si loo bixiyo ad eegyo kormeer ku socda badda.
Waxay la midoobi doontaa HY-2B, oo la bilaabay Oktoobar 2018, iyo HY-2D oo xigta si loo sameeyo shabakad loogu talagalay la soc odka jawiga badda, taasoo u saamaxaysa Shi inaha in ay fuliso 24/7 dhammaan cimilada sa re ee la socoshada xogta badda, dhererka du sha sare ee badda, heerkulka iyo dabaylaha iyo dhererka hirarka.
Dayax gacmeedka HY-2C iyo gantaalka xambaara Long-March-4B waxaa soo saaray shirkadda Sayniska iyo Teknolojiyada ee Aero space ee Shiinaha